सेक्सुअल मेडिटेसन किन गरिन्छ ? – Health Post Nepal
सेक्सुअल मेडिटेसन किन गरिन्छ ?
२०७७ चैत ८ गते १९:०३
आजभोली मानिसको दैनिकी निकै व्यस्त बनेको छ। मानिसलाई योग, ध्यानका लागि फुर्सदनै हुँदैन। तर, व्यस्त दैनिकीबाट जसले समय निकालेर मेडिटेसन गर्छन् उनीहरूले थुप्रै स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका हुन्छन्।
मेडिटेशन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। धेरै स्वास्थ्य समस्याबाट सहजै हल पाइन्छ। जुन चिजबाट हामी हडबडाउँछौं वा डराउँछौं त्योसँग लड्ने क्षमता पनि बिकास हुन्छ।
तपाईलाई थाहा छ मेडिटेसनबाट के-के फाइँदा हुन्छ? के मेडिटेसन गर्दा मानसिक तनाव तथा शरीरका बेकार चिज मात्रै दुर हुनेहुन्। त्यत्ति मात्र नभएर मेडिटेसन गर्दा सेक्सुअल समस्या पनि टाढा हुन्छ।
यस मेडिटसनलाई सेक्सुअल मेडिटेसन भनिन्छ। जसलाई मानिसले गरिरहेका हुन्छन्। सेक्सुअल सन्तुष्टिका लागि यो मेडिटेसन गर्नुपर्छ। यो मेडिटेसन गर्दा सेक्सुअल जीवन झनै आनन्दमय हुनजान्छ।
मेडिटेसनमा शान्तिको ठूलो योगदान हुन्छ। सधै एउटा शान्त स्थानलाई छनोट गर्नुपर्छ। यो मेडिटेसनलाई हामी आफ्नो बेडरुममा पनि गर्नसक्छौं।
तर, आफ्नो बेडरुमको रोशनी हल्का कम गर्नुपर्छ। आफ्नो कोठामा कुनै इलेक्ट्रिक डिभाइज जस्तै फ्रिज वा टिभी जस्ता उपकरण बन्द गर्नुपर्छ। एकदमै शान्त माहोल बनाउनुपर्छ। र, आफ्नो कोठाको तापक्रम सामान्य पार्नुपर्छ।
मेडिटेसन गर्दा शरीरलाई आरामदायी अवस्थामा लैजानुपर्छ। यो मेडिटेशन गर्दा एकदमै आरामदायी मुन्द्राको चयन गर्नुपर्छ। कमल मुन्द्रामा बस्न सकिन्छ। या पाउको बेलमा पनि बस्नसकिन्छ।
आरामदायी मुन्द्रामा बसिसकेपछि आँखा बन्द गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टनरलाई पनि यस्तै गर्न भन्नुपर्छ। त्यसपछि एक नर्मल मेडिटेशन झै आफ्नो स्वास र शरीरमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ। मेडिटेसन गर्दा दिमागमा अर्को कुरा ल्याउनु हुँदैन। आफ्नो पार्टनरमा ध्यान दिनुपर्छ। र, पार्टनरले पनि तपाइमाथि ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ।
सेक्सुअल मेडिटेसन गर्दा पुरै ध्यान पार्टनरमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो हात र अनुहारले पार्टनरलाई भावना देखाउनसक्नेगरी पार्टनरमा बिलिन हुनुपर्छ। यस दौरान पार्टनरले कस्तो भाव प्रकरट गरिरहेको छ त्यसमा पनि ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ।
यो मेडिटेसनका बेला पूरै समय गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सुअल मेडिटेसनपछि पार्टनरसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। यो मेडिटेसनको २० देखि ३० मिटेनपछि सेक्स गर्नसकिन्छ।
मेडिटसनका क्रममा आफ्नो पार्टनरमा ध्यान केन्द्रीत गर्दा अझै बढी आकर्षित हुनसकिन्छ। र, यसरी सेक्स गर्दा भरपूर आनन्द लिनसकिन्छ।
Tags: मेडिटेसन, यौन